Taageere Arsenal ah oo sameeyey falkii ugu xumaa ka dib markii uu ku caajisay kulankii ay garaaceen Leicester - Hablaha Media Network
Taageere Arsenal ah oo sameeyey falkii ugu xumaa ka dib markii uu ku caajisay kulankii ay garaaceen Leicester
HMN:- Taageere kooxda Arsenal ah ayaa waxaa lagu qabtay isagoo ku kacaya falkii ugu xumaa ee laga filan karay difoose garoon u yimid inuu ciyaar ka daawado.
Taageerahaani nasiib ma lahan sababtoo ah kaamirooyinka ayaa soo qabtay isagoo daawanaya muuqaal galmo ah intii lagu jiray guushii ay kooxdiisu ka gaartay Leicester City bartamihii Isbuucaan.
Gunners ayaa dhalisay gool muhiim u ahaa loolankooda afarta kaalin ee sarre balse wuu soo daahay natiijo ahaan ciyaartaan waxay ku badiyeen 1-0 taasoo ka dhigan inay weli nooshahay rajadooda ku aadan usoo bixitaanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo aadan.
Balse taageerahaan ayaa ciyaarta ku caajisay ka dibna lumiyey xiisihii uu u qabay kulanka oo dhan taasoo keentay inuu ku mashquulo moobilkiisa wuxuuna daartay muuqaal galmo ah.
Laakiin taageere fadhiyey dabaqa isaga ka sarreeya ayaa muuqaal ka duubay maadaama uu la yaabay habdhaqanka taageerahaan, ka dibna wuxuu go’aansaday inuu muuqaalkaan soo dhigo baraha bulshada.
Kulanka xigga, Arsenal ayaa wajaheysa kooxda ay ku xifaaltamaan Waqooyiga London ee Tottenham Hotspur taasoo u dagaalameysa hanashada koobka Premier League.
Halkaan hoose ka daawo muuqaalkaas laga qabtay taageerahaas yaabka leh.